नेपालले दिएको उपहार गैंडा हेर्न चियिाँको भिड – Saurahaonline.com
नेपालले दिएको उपहार गैंडा हेर्न चियिाँको भिड
सौराहा अनलाइन | २०७५, १८ चैत्र सोमबार
बेइजिङ,१८ चैत । चीनलाई उपहारस्वरुप उपलब्ध गराइएका ‘सोल्टी’ र ‘मितिनी’ हेर्न चिनियाँको भीड लाग्न थालेको छ । साङहाई वन्यजन्तु चिडियाखानामा नेपालबाट लगिएको गैंडाको जोडी सोल्टी र मितिनी अवलोकन गर्न गत साता सर्वसाधरणलाई खुला गरिएको हो ।
यो चिडियाखाना सर्वसाधरण र विदेशी पर्यटनसमेत जाने गरेका छन् । नेपाली गैंडा हेर्दै उनीहरुले नेपालमा कति धेरै यस्ता गैंडा होलान्, त्यहाँको जंगलमै हेर्न जान पाए कस्तो हुन्छ भन्दै आपसमा कुराकानी गरेको त्यहाँ रिर्पोटिङ गर्न पुगेकाहरुले सुनाए । यसबाट चिनियाँ पर्यटन नेपाल भ्रमणमा आकर्षित गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ ।
०७५ चैत ९ मा नेपालले चीनलाई उपहारस्वरुप सोल्टी र मितिनी नामका एक जोडी गैंडा दिएको थियो । चिनियाँहरुले विश्वकै दुर्लभ जन्तुमा गनिने एकसिंगे गैंडा हेर्न पाउँदा निकै उत्साहित छन् । गैंडा हेर्न आउनेको घुईचो लागेको समाचार आउन थालेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्णमा पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
मुस्ताङी कोरोनाको कारण जाडो छल्न झरेनन् बेँसी २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
भारतले कूटनीतिक तहबाटै नेपालसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
फूलका विरुवा हेरचाह गर्ने केही टिप्सहरु ! २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
दाहालको व्यवहारले बिच्किए नेपाल २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
मोडलको दाबी- लुगा फेर्न लाग्दा निर्माता कोठामा आए २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
शास्त्रले भन्छ- जीवनमा भुलेर पनि अपुरो नराख्नुस् यी ५ काम २०७७, ९ मंसिर मंगलवार
मुस्ताङी कोरोनाको कारण जाडो छल्न झरेनन् बेँसी
बेनी । विगत वर्षहरूमा कात्तिकको सुरुवातसँगै जाडो छल्न न्यानो क्षेत्रतर्फ लाग्ने मुस्ताङीहरू यस वर्ष भने.....
फूलका विरुवा हेरचाह गर्ने केही टिप्सहरु !
मोडलको दाबी- लुगा फेर्न लाग्दा निर्माता कोठामा आए
मुलाको जुसका यी हुन् चामत्कारिक फाइदा !
भारतमा १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु
प्रिमियर लिगमा बर्नलीको पहिलो जित, क्रिस्टल प्यालेस पराजित
मौसम : कतै आंशिकदेखि सामान्य वदली, हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना